DJI Phantom 4: astaamaha farsamada iyo isbarbardhiga | Qalabka bilaashka ah
DJI waa shirkad caan ah oo ku guuleysata abaalmarinta shirkadda tiknoolajiyadda Shiinaha. Waxay u heellan tahay naqshadaynta iyo soo saarista diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dusha ka qaadaya sawir qaadista. Tayadiisu waa heer sare oo astaamaha nooc kasta oo diyaarad Drone ah ayaa ka dhigay mid ka mid ah kuwa loogu baahida badan uguna guulaha badan suuqa. Kaliya maahan inay yihiin hogaamiyaasha iibka, sidoo kale waa kuwa ugu badan ee loo isticmaalo telefishanka, shaqada muusikada, warshadaha filimada loogu talagalay duubista, iwm.
Waxay hadda u taagan tahay qiyaastii 70% saamiga suuqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waana wax aad u sarreysa haddii aad sifeyso kaliya suuqa xirfadda leh. Xaqiiqdii, DJI wuxuu ku guuleystay 2017 Tiknoolajiyadda & injineernimada Emmy Award tikniyoolajiyadeeda loogu talagalay kamaradaha ay ku rakiban yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Hadana haddii uu jiro nooc diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo muuqda, taasi waa taxanaha Phantom.
1 Maxaan u isticmaali karaa maxaanse u isticmaali karin?
1.1 Ma u baahanahay inaan iibsado diyaarad aan duuliye lahayn?
2 Kala duwanaanshaha moodooyinka kale ee DJI
3 Calaamadaha farsamada Phantom 4
3.4 Phantom 4 Sare
3.5 Phantom 4 Hormarsan +
4 Hagaajinta DJI Phantom 3
4.1 Mustaqbalka DJI Phantom 5
Maxaan u isticmaali karaa maxaanse u isticmaali karin?
Diyaarado loo yaqaan 'DJI drones' ayaa gaar ahaan ah loogu talagalay in lagu sameeyo duubista iyo / ama hawlaha qabashada sawirka. Iyagu ma aha aerodynamic iyo moodellada miisaanka fudud ee tartanka. Marka haddii aad raadineyso diyaarad aan duuliyaha lahayn, DJI maahan ikhtiyaarka ugu fiican. Laakiin xasilloonidiisa iyo astaamaheeda ayaa ka dhigaya mid ku habboon hiwaayadda iyo xirfadleyda inay toogtaan fiidiyowga oo ay qaadaan sawirrada hawada. Taasna waa mid ka mid ah alaabada ugu fiican ee aad ka heli karto.
Mararka qaarkood sidoo kale waxaa la i weydiiyaa waa hadaad culeyska qaadi karto, tusaale ahaan, in loo qaado xirmooyinka samatabbixinta ama sahayda meelaha aan la geli karin gurmadka, iwm. Runtu waxay tahay in Quadcopter-ka Phantom uu kor u qaadi karo dhowr boqol oo garaam oo dheeri ah, laakiin looguma talagalin inay qaadaan culeys ka baxsan taageerada iyo qalabka sawir qaadista ee ay wataan. Haddii aad iska bixiso waad shuban kartaa wax kale ... Waxa hubaal ah inay jiraan DJI S900 (ama taxanaha Warshadaha) oo leh 6 jilaayaal oo xajin kara ilaa 5 kg, waa qaddar aad u tiro badan.
Gunaanad, haddii aad kaliya rabto diyaarad wanaagsan oo hagta ama sawirro fiican qaadata, DJI waa xulasho wanaagsan. Tartanka iyo ujeeddooyinka kale, waa inaad ka fekertaa inaad aragto noocyo kale...
Ma u baahanahay inaan iibsado diyaarad aan duuliye lahayn?
Hadaad tahay bilow weligoodna midna iskama dayin, jawaabtu waa maya. Waa inaad kubilaabataa qaab jaban si aad ula qabsato. Haddii aad tahay hiwaayad xilli-yaqaan ah ama xirfadle ah, ha ka shakin in DJI ay kuu hayso waxyaabaha kuugu fiican.
Hadday jawaabtu haa tahay, waa inaad adiguba isweydiisaa nooca DJI ama moodeelka aad ubaahantahay. Tusaale ahaan, haddii aad sawirro iyo fiidiyow ka duubeyso Phantom, waxaa laga yaabaa inaad la degto DJI Phantom 3 Pro haddii aad tahay hiwaayad. Laakiin haddii aad u baahan tahay wax kale, ka dib si toos ah ugu tag mid ka mid ah noocyada 'DJI Phantom 4'.
Kala duwanaanshaha moodooyinka kale ee DJI
DJI wuxuu leeyahay dhowr nooc oo loogu talagalay qanciyaan baahiyaha kala duwan ee adeegsadayaasheeda. Moodooyinka ugu caansan waa:
DJI Spark: qof kasta oo raadinaya diyaarad fudud oo fudud. Ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay hiwaayadda. Way jaban yihiin oo cabirkoodu aad uma weyna, laakiin tayada iyo tiknoolajiyadda weli way ka sii wanaagsan yihiin. Laakiin ha fileynin faa'iidooyinka ama teknoolojiyada ee moodooyinka kale ee ka sarreeya ...
DJI Mavic: waxay ku labanlaabmayaan qiimaha Spark-ka, sidaa darteed iyagu ma ahan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee jaban. Taxanahan ayaa caan ku ah taageerayaasha sawir qaadista iyo fiidiyaha. Waxay leedahay qaab casri ah iyo habab duulimaad caqli leh, oo leh ismaamul wanaagsan, xawaare, xasilooni iyo aamusnaan la'aan. Waxaa jira dhowr nooc oo ah diyaaraddan, sida Air, Pro, Platinum, iwm.
DJI Phantom: Waa boqorka shirkadda afar geesoodka ah. Way fiicantahay in lagu qaado kamarad tayo sare leh istaagkeeda si loo qaado sawirada ugufiican loona duubo fiidiyow qeexitaan sare leh. Qiimaheedu wuu sarreeyaa, laakiin waa u qalantaa inaad ku bixiso si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Taasi waa sababta ay ugu jeceshahay xirfadlayaasha sawir. Waqtigan xaadirka ah, waxay u socdaan nooca 4aad, oo sidii kii hore, waxaa jira noocyo kala duwan sida kuwa caadiga ah iyo kuwa Pro iyo Pro Plus, wax yar ka qaalisan, laakiin lagu daray.
DJI Waxyooday: taxane kale oo drones ah oo leh 4 matoor iyo awood weyn iyo kacsanaan si loo sameeyo duubista ugu fiican ee dhaqdhaqaaqa. Tusaale ahaan, si aad u qaadatid tallaabo filim, aad raacdo dadka dhaqdhaqaaqa, baabuurta, iwm.
DJI Muraayadaha: qiimihiisu waxyar ayuu ka sarreeyaa Spark, laakiin wuu ka jaban yahay Phantom iyo Mavic. Moodelkani wuxuu si gaar ah ugu fiican yahay isticmaalka muraayadaha FPV, oo loogu talagalay inuu yeesho khibrad duulimaad oo dhammaystiran. Dhaqdhaqaaqa madaxaaga ayaa beddeli doona jihada kamaradda si aad wax walba u aragto inta duulimaadku socdo. By habka, taasi macnaheedu maahan in kuwii hore aysan la jaan qaadi karin FPV, kaliya in tani ay si fiican ugu dhexjirto tikniyoolajiyadan.
Warshadaha DJI: waa taxane gaar ah oo xoogaa adeegsad gaar ah leh. Way qaadi karaan culeys badan maxaa yeelay waxay badanaa heystaan ​​ilaa 8 rotors halkii ay ka ahaan lahaayeen 4 caadiga ah. Waxaa loo adeegsadaa warshadaha beeraha.
Waxaad ka iibsan kartaa oo isbarbar dhigi kartaa mid ka mid ah moodooyinkaas dukaanka rasmiga ah ee DJI oo Isbaanish ah. Waxa kale oo aad ka heli doontaa tiro badan oo qalab ah (taageerooyin, kamaradaha, ...) taxanaha oo dhan.
Hadda waad ogtahay sifooyinka moodooyinka DJIAynu la tagno Phantom 4, mid ka mid ah astaanta astaanta ...
Calaamadaha farsamada Phantom 4
El kii ugu dambeeyay ee ku soo biira taxanahan wuxuu ahaa Phantom 4, oo leh horumarin la taaban karo oo ku saabsan moodelladii hore. Astaamaha farsamo ee diyaaraddani waa kuwo cajiib ah.
Waa kan taxanaha aasaasiga ah ee Phantom 4, oo leh waxqabad wanaagsan iyo astaamo farsamo oo aan halkan ku faahfaahinayo:
Miisaan: 1380 g
Xawaaraha kori: ilaa 6m / s (waxay kuxirantahay qaabka duulimaadka)
Xawaaraha duulimaad ee ugu badan: illaa 72 km / saacaddii (waxay kuxirantahay qaabka duulimaadka)
Xagalka u janjeera ugu badnaan: illaa 42º (waxay kuxirantahay qaabka duulimaadka)
Xawaaraha ugu badan ee xagasha: illaa 250º / s (waxay kuxirantahay qaabka duulimaadka)
Dhererka ugu badan: 5000m
Iska caabinta dabaysha ugu badan: 10m / s
Nolosha batteriga: 28 daqiiqo qiyaastii. oo leh 5350mAh Li-Po batari iyo xeedho ay ku jiraan
Heerkulka hawlgalka: 0-40ºC
Nidaamka juquraafiga: GPS + GLONASS
Dejinta: 3 faasas
Kaamiro: 12.4 MP CMOS f / 2.8 aperture, oo leh taageero HDR iyo UHD (4K)
Kaarka xusuusta: wuxuu taageeraa microSD illaa 64 GB UHS-1 fasal
Soo noqnoqoshada xakamaynta fogaanta: 2.4 Ghz (fog oo leh taakuleynta qalabka mobilada) Kobciyay Lightbridge
Nidaamka ogaanshaha caqabadda: 5-way oo leh saddex nooc oo dareemayaal ah (hore, gadaal, hoosta iyo dhinacyada)
Telefoonka gacanta ee loogu talagalay Muuqaalka Sawirka: DJI GO 4 ee iOS iyo Android (oo leh daaweyn 220ms)
Qiimaha: qiyaastii. € 1100
La DJI Phantom 4 Pro version waa nooc la hagaajiyay marka la eego saldhigga, oo leh qaar ka mid ah siyaado. Waxaa ku jira dhammaan kuwa kor ku xusan oo lagu daray:
Fogaanta ama dhererka ugu sarreeya: 6900 m
Nolosha batteriga: 30 daqiiqo qiyaastii.
Miisaan: 1400 g
Sensor Camera: CMOS 20MP
Horumarintani waxay matalayaan a koror ku dhowaad € 500, taasi waa, waxay lahaan lahayd a qiyaasta qiimaha ee 1600 €.
La DJI Phantom 4 Pro Plus version Waa horumar ku saabsan nooca Pro, iyo qiimo yar oo ka kordhay tii hore. Horumarinta, oo ay ku jiraan wax kasta oo saldhigga Phantom 4 sidoo kale yeelan lahaa, waa:
Kontaroolka xakamaynta: oo ay ku jiraan shaashad 5.5-inji ah, waxay baabi'ineysaa baahida loo qabo in la isticmaalo aaladda moobiilka
Joogtaynta xakamaynta raadiyaha: waxaad isticmaali kartaa 2.4 iyo 5.8 Ghz si loo yareeyo faragelinta
Phantom 4 Sare
El DJI Phantom 4 Sare Way ka yara duwan tahay Pro. Waxay la wadaagtaa astaamaha badankood Phantom 4, sida iska cad, laakiin sifooyinka soo socda ee ka soocaya Pro:
Nidaamka ogaanshaha caqabadda- Waxay leedahay oo kaliya dareenka culeyska hortiisa iyo xagga hoose, laakiin waxay baabi'isaa inta kale ee dareemayaasha gadaal iyo dhinacyada. Sidaa darteed, haddii aadan si fiican u xakameynin, waxay ku dhici kartaa dhinac iyo gadaal gadaal ... Taasi waa, way ka xishoonaysaa tan tan Pro.
Peso: 20g khafiif
Sidaa darteed, waa hal ikhtiyaar oo dheeri ah u janjeedha ilaa khubarada ugu badan iyo inay iyagu si wanaagsan u fahmaan tijaabinta farshaxanadan. Taabadalkeed, qiimuhu wuxuu udhaxeeyaa saldhiga Phantom 4 iyo Pro, taasi waa, qaali uma aha sida Pro ama Pro Plus.
Phantom 4 Hormarsan +
Haddii aan u qaadno Horusocodka tixraac ahaan, DJI Phantom 4 Advanced Plus xirka kaliya qiimaha qiyaastii € 100 ka sareeya. Astaamaha waa isku mid. Waxa kaliya ee ku kala duwan waa:
Xakamaynta fog: oo leh shaashad 5.5 included ah
Sida Pro + loo barbar dhigo Pro.
Hagaajinta DJI Phantom 3
Hadaad layaabantahay sida DJI Phantom 4 iyo Phantom 3, waa wax iska fudud in la sharaxo. Haddii aan isbarbardhigno Heerka 3-da Phantom iyo saldhigga Phantom 4 waxaan haysannaa waxyaabaha soo socda:
Is-maamul: 23 min vs 28 min
Miisaanka: 768g vs 1380g
Sensor Camera: 12MP FullHD CMOS vs 12MP 4K CMOS
Isku xirnaanta: WiFi vs Enhanced Lightbridge (in ka badan x4 xawaare vs WiFi)
Juquraafiga: GPS vs GPS + GLONASS
Qiimaha: qiyaastii. € 728 vs ku dhowaad. € 1100
Dabcan tiknoolajiyada iyo qaababka wadista ayaa hagaagay. Marka la soo koobo, waa la gaadhay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo tayo sare leh iyo faa'iidooyinka, in kasta oo ay iyaduna leedahay miisaan aad u sarreeya. Xaqiiqdii, sidoo kale waxaa jira dhowr nuqul oo ah Phantom 3, sida Pro iyo Advance. Haddii aan isbarbar dhigno astaamaha Phantom 3 Pro, waxay xoogaa la mid yihiin halka uu Phantom 4 ka bilaabmayo, taas oo ah, masaafo dhan 5000m iyo kamarad 12MP ah oo leh awoodda 4K.
Sababtaas darteed, haddii aad raadineyso tusaale la mid ah saldhigga Phantom 4, laakiin qiimo ka jaban, waad sameyn kartaa iibso Phantom 3 taas oo leh qiimo kayar sida ay u duqowday. Waxa kaliya ee si aad ah u hooseeya waa isku xirnaanta u dhexeeya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kantaroolaha, kaas oo si weyn loogu hagaajiyay 4.
Mustaqbalka DJI Phantom 5
Waxa aan ka filan karno mustaqbalka DJI Phantom 5 Waa diyaarad aan duuliye lahayn oo leh horumarro la taaban karo oo ka badan 4. Inkasta oo Phantom 4 uu hadda matalayo dusha sare ee kala duwanaanshaha DJI, laakiin waqti dheer kuma qaadan doono jiilka soo socda inay yimaadaan. Haddii aan falanqeyno hagaajinta 4 ee ixtiraamka 3, waxaan filan karnaa diyaarad aan duuliye lahayn oo leh horumar dhowr qodob ah:
Madax-bannaanida- DJI Phantom 5 waxay u badan tahay inuu ka awood badan yahay 4-ta, laakiin kala duwanaanshaheeda ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu xitaa ka sii fiicnaado. Waxaa laga yaabaa in daqiiqado yar gudahood ay ka badnaan doonaan nuska saac ee hadda jira ee ay had iyo jeer sii socdaan.
Xuduudaha kala duwan: Waxaa laga yaabaa in horumarin lagu sameeyo tikniyoolajiyadda 'Lightbridge', maadaama haddii qaybta muuqaalka la hagaajiyo, xiriiriye ka wanaagsan ayaa sidoo kale loo baahnaan lahaa si looga fogaado dib-u-dhaca iyo in xawaaraha ballaadhku uu sareeyo.
Gaar: Waxaa laga yaabaa Phantom 5 cusub inuu jabiyo xayiraadda 7000m.
Muuqaal- Kaamiradu waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha sida aadka ah wax uga beddeli lahaa, laga yaabee inay ku sarreyso heerka FPS ee ka sarreeya 4K iyo xitaa awoodda ay ku qabsan karto 8K.
Waxaan rajeynayaa inaan ku haysto ayaa ka caawiyay xulashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn shakigaagana cadee.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » DJI Phantom 4: astaamo farsamo iyo isbarbardhig
RJ45: wax walba oo ku saabsan isku xira shabakada